အတိုကောက် Initialism နှင့် Indefinite Article များ - Myanmar Network
အတိုကောက် Initialism နှင့် Indefinite Article များ
Posted by Soe Soe Win on October 20, 2014 at 11:53 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စာမှာ အတိုကောက်တွေ အမြောက်အမြား တွေ့ကြလိမ့်မယ်။ Initialism ဆိုတာ နာမည်တစ်ခုခု (အထူးသဖြင့် ရှည်လျားတဲ့နာမည်) မှာ ပါဝင်တဲ့ စာလုံးတွေက ထိပ်ဆုံး စာတစ်လုံးစီကို သီးခြားစီ အသံထွက်ခေါ်တာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ United Nations တို့ United States of America တို့ကို UN, USA စသဖြင့် အတိုကောက်လုပ်ပြီး ခေါ်တာမျိုးပါ။
အခု ဆွေးနွေးတင်ပြချင်တာက indefinite article တွေဖြစ်တဲ့ ‘a’ နှင့် ‘an’ တို့ကို အဲ့ဒီ initials တွေနဲ့ တွဲသုံးတဲ့အခါ တွေ့ရတဲ့ လွဲချက်လေးတစ်ခုကိုပါ။ ဒီလွဲချက်ကလည်း non-native speakers တွေ လွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ native speakers တွေကပါလွဲတာ တွေ့ရလို့ပါ။ Indefinite article တွေကို English speakers တွေက စကားပြောတွေမှာ မှန်အောင်သုံးပေမဲ့ အရေးအသားမှာတော့ အလွဲတွေ လုပ်ကြပုံရပါတယ်။
အောက်ပါ ဥပမာတွေက နာမည်ကြီး သတင်းဌာန ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေ၊ လုပ်ငန်းအကြံပေး ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ အရေးအသား တစ်ချို့ပါ။
The 404 or Not Found error message isaHTTP standard response code.
Applying toaMBA program can help you advance in your career or switch careers entirely.
A NBC executive indicated that the independent formatted Nonstop channels were doing well but needed separate 24/7 programming.
There are several benefits to beingaRSVP Volunteer.
Did you setup and assignaSTMP server for this account?
ဒီပြဿနာက ‘a’ နှင့် ‘an’ ကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကို ကောင်းမွန်စွာ နားမလည်လို့ ဖြစ်ရတာပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောမှာ (သရ) တွေဖြစ်တဲ့ a,e,i,o, u (တစ်နည်းအားဖြင့် “အ” အသံ) တွေနဲ့ စတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့အရှေ့မှာ ‘an’ ကိုသုံးရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး လိုက်နာကြတယ်။
တစ်ကယ့် ဥပဒေသအစစ်ကို အလွယ်မှတ်ရရင် စကားလုံး တစ်လုံးသည် vowel နဲ့စသည်ဖြစ်စေ consonant နဲ့စသည်ဖြစ်စေ (အ) အသံထွက်ရင် ‘an’ ကို သုံးရမှာဖြစ်ပြီး (အ)အသံ မထွက်ရင် ‘a’ ကိုသုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စောစောက initial တွေအကြောင်း ဒီမှာပြန်ကောက်ရရင် initial တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဖတ်တဲ့အခါ တစ်လုံးချင်း အသံထွက်ရတယ်။ ဥပမာ UN (ယူအဲန်) ၊ USA (ယူအက်စ်အေ) ၊ UK (ယူကေ) တို့မှာ U သည် vowel ဖြစ်သော်လည်း (ယူ)ဟု အသံထွက်ရတယ် မဟုတ်လား။ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာစာလုံး ၂၆ လုံးဟာ sound symbol တွေဖြစ်ပါတယ်။ Sound Symbol တွေမှာ အသံထွက် နာမည်တွေ ရှိတယ်။ တစ်ချို့သော consonant တွေမှာ vowel အသံထွက် ရှိကြတယ်။ အောက်ပါ consonant တွေကို အသံထွက် ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဒီတော့ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသားမှာ sound symbol တဖြစ်လဲ initial တွေရဲ့ အရှေ့မှာ ‘a’ သုံးမလား ’an’ သုံးမလား ဆိုတာ ရှင်းလင်းစွာ သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ ဒါဆိုရင် စောစောက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေကို အမှားပြင်ပေးလိုက်ကြရအောင်။
ကဲ နိဂုံး အနေနဲ့ ထပ်မှတ်လိုက်ပါ။ အတိုကောက်တွေ အရှေ့မှာ ‘a’ ထည့်ရမလား ‘an’ ထည့်ရမလား ဆုံးဖြတ်ဖို့ အတွက် အတိုကောက်စာလုံးကို အသံထွက်ဖတ်ကြပါ။ vowel အသံထွက်ရင် ‘an’ ထည့်ပြီး consonant အသံထွက်ရင် ‘a’ ထည့်ရုံပါဘဲ။
Dailywritingtips.com မှ Maeve Maddox ၏ Indefinite Article With Initialisms ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် (စာ) တည်းဖြတ်ရန် အကြံ...
Permalink Reply by aungnaingthu on October 21, 2014 at 16:23
Permalink Reply by Hnin Thandar Aung on October 21, 2014 at 21:12